Daangaa Itiyoo-Eertiraatti daldalli cimeera - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Daldaltoota birrii fi naafqaa jijjiran
Wal gaarreeffannaan mootummaa Itoophiyaa fi Eeritiraa jidduu waggoota 20 ture waliigaltee nageenyaa baatiiwwaniin dura irra gahameen xumura argateera.
Balaliinsi qilleensaa Finfinnee gara Asmaraatti taasifamuus kan itti fufee yoo ta'u, sababii dhimoota viizaa fi gibira seera qabsiisuu jedhuutiin konkolaataa fi miilaan daangaa qaxxaamuruun ittifamee ture.
Haa ta'u malee, jiraattonni magaaloota daangaa irratti argaman keessa jiraatan kan akka daldalasaanii daangarratti hingaggeeffanneef kan isaan dhorke hinjiru.
Daangaan Suudaaniitti dhihoo ta'e Humaraa- Omahaajar dhiheenya kana banamuunsaa ni yaadatama. Banamuu daangaa kanaatiin walqabatees, dhiheenya daangichaa irratti tiraafiki olaanaan mul'ataa jira.
Goodayyaa suuraa Daangaa Itiyoo-Eertiraa Umaraa-Omahaajar
Humaraatti namoota maallaqa jijjiiraniif gabaan baayyachaa jira. Doolaarri tokkoos gara Naafqaa Eeritiraa 15tti kan geeddaramu yoo ta'u, dolaarri tokko ammoo gara birrii Itoophiyaa 28 tti geedarama. Naannichattis daldaltooti birri gara Naafqaatti jijiran ni argamu.
Goodayyaa suuraa Jijjiirtoota maallaqaa Humaraatti argaman
Daldaltoonni wantoota garaa garaa omishanis lakkoofsi maamiltoota isaanii dabalaa jiraachuu dubbatu. Naannichi baayyee kan ho'u waan ta'eef namoonnis sireewwan ala baafatanii manaan ala ciisu.
Waldhabdee biyyoota lamaan jidduutti umamee tureen, miseensoonni maatii tokkoolleen adda bahanii turan waggoota hedduuf. Erga waliigalteen nageenyaa taasifameen booda namoonni bara dheeraaf adda bahanii turan amma wal argaa jiru.
Jalqabuu waraana Itiyoo- Eritiraatti aansees, namoonni biyyaa fi qabeenyaasaanii dhiisuun baqatan heddu turan.
Namoota kanneen keessayis lammiieen Eertiraa asiin gadiitti mul'atan keessatti argamu. Namoonni lamaan kunneen akka jedhaniitti, gaaffii qabeenyaa isaanii waggoota 20 dura dhiisanii deeman argachu qabna jedhu dhiyeessuuf Humaraatti argamaniiru.
Viidiyoo Itoophiyaafi Eeritiraa gidduu maaltu tahaa jira?
2 Adooleessa 2018